Nampametra-panontaniana Mikasika Ny Fiarovana Ny Kianja Ny Fahafatesan’ilay Mpilalao Mpanafika Kameroney Albert Ebossé Tao Alzeria · Global Voices teny Malagasy
Nandika (en) i Elizabeth Tamblin
Voadika ny 29 Aogositra 2014 12:05 GMT
Pikantsarin'i Albert Ebossé, 1990-2014, mpilalao mpanafika Kameroney ao amin'ny ekipa JSK Kabylie
Namoy ny ainy tamin'ny Asabotsy hariva teo ilay mpilalao mpanafika Kameroney Albert Ebossé, avy ao amin'ny ekipa JS Kabylie, rehefa voatoraky ny mpijery taorian'ny faharesen'ny ekipany tao amin'ny firenena manoloana ny ekipa USM Alzeria azy tamin'ny isa (2-1), tamin'ny andro faharoan'ny lalao fifaninanana baolina kitra Alzeriana fiadiana ny ho tompondaka. Taitra tanteraka ireo olona akaikin'ity mpilalao ity sy ny tontolon'ny baolina kitra. Namoy ny ainy tao amin'ny hopitalin'i Tizi Ouzou, ao Kabylie (110 km ao atsinanan'i Alger) ity mpilalao Kameroney 24 taona ity noho ny ratra nahazo azy.
Nahatafiditra baolina tokana azon'ny ekipany i Albert Ebossé ary nampisafoaka ireo mpanohana ny JSK ny faharesena tao an-tanànany. Nanomboka nanipitsipy zavatra ireo mpijery tao amin'ny kianjan'i Tizi Ouzou raha iny hamonjy trano fisoloana akanjo ireo mpilalao, voatoraka tamin'izany ity mpilalao Kameroney ity ary izany no nitarika ny fahafatesany.
Mitantara ny fitrangan'ny loza i Kamel Yelsi, mpiara-milalao aminy ao amin'ny JSK Kabylie :
Raha ny marina dia voatoraka indroa izy: ny voalohany teo amin'ny hatotanany ary ny faharoa teo amin'ny hatokany. Tsy afa-nihilana i Albert, noentina avy hatrany tany amin'ny hopitaly izy ka natao ny fomba rehetra namonjena azy. Tsy hitako izay lazaina. Andeha atao hoe olan'ny Alzeria izany. Tao amin'ny toerana maromaro tao an-kianja, nafana fo tokoa izy ireo ka lasa nampatahotra. Nanjary toy ny fankahalana. Raha nitosaka ireo fanevatevana, azo tsy noraharahiana ihany. Saingy bolongam-bato no nitorahan'izy ireo fa tsy mba vatokely tsotsotra .
Teraka tao Douala tamin'ny 6 Oktobra 1989 i Ebossé.
Nanatevin-daharana ny ekipan'i JS Kabylie izy tamin'ny Jolay 2013, naneho ny fihetseham-pony voalohany tamin'ny fandraisana azy tao an-tanàna i Ebossé nandritra ny antsafa niarahana tamin'ny JSK TV. Hoy izy tamin'izany hoe :
Mahay mandray olona i Tizi Ouzou, tia namana ny mponina ao aminy
Tao amin'ny habaka sy ny tambajotra sosialy, nivadika hatezerana ny tsy finoana. Malahelo ny toe-javatra nitarika ny fahafatesany ny bilaogy Kameroney Kamtoo :
Naniry fatratra i Ebossé ny hisalotra ny fanamian'ny ekipam-pirenena Kameroney Lions Indomptables indray andro any. Nofaranan'ny adalan'ny olombelona tao amin'ny kianja filalaovana baolina kitra anefa izany nofinofiny izany androany Asabotsy 23 Aogositra 2014. Toerana izay nahavitany zavatra maro hatramin'ny nahatongavany tao amin'ny ekipan'i Kabylie.
Niampanga ny tsy fahampian'ny fiarovana tao an-kianja ny sasany tao amin'ny twitter :
Nahoana i Alzeria no miandrandra hikarakara CAN kanefa tsy mahavita akory miaro ny kianja keliny mahazaka olona 10 000 #Ebossé
Naneho ny heviny ihany koa ny minisitry ny fanatanjahantena ao Côte d'Ivoire:
Nahoana no avela hiditra miaraka amin'ny fitaovam-piadiana ao anaty kianja ireo mpijery? Herisetra any amin'ny kianjan'i Afrika Avaratra.
Maniry i Olivier Enogo (tao amin'i Julie Owono avy ao amin'ny Global Voices) hahatsiaro saina mba hampandroso ny famahana ity olana ity ireo mpiara-milalao baolina amin'i Ebossé :
Ry namana mpilalao baolina kitra, mety no lohanareo no voa teo amin'ny toeran'i Ebossé. Iza no handray fitenenana amin'ny anaran'ity tovolahy ity? Iza no hiaro ny fahatsiarovana azy? Iza ao amin'ny Baolina Kitra iraisam-pireena Afrikanina no ho sahy hiteny amim-pahaizana hanohitra ity hadalana ity? Raha ilaozanareo miady tambin-karama, izay ambim-bola mba foin'ireo matanjaka ho anareo, maninona raha miaro izay anananareo sy izay tsy voavidim-bola: ny voninahitrareo sy ny olona mitovy aminareo. Saintsaino raha indray andro any, mandà tsy hilalao mandritra ny fotoana tsy voafetra ianareo, mandram-pandraisan'ny FIFA fepetra henjana, hatrany amin'ny fampiatoana ny ekipa izay manana mpanohana nanao fitondrantena manavakavaka.
Nanome baiko hanokafana fanadihadiana ara-pitsarana momba ity fahafatesana ity ny minisitry ny atitany, araka ny filazan'ny filohan'ny Ligin'ny Baolina Kitra matihanina Mahfoud Kerbadj. Ho fanomezam-boninahitra ity tanora mpilalao ity, indro ny lahatsary mampiseho ireo zavatra tsara vitany :